Tusaalaha Kursiga Ciyaaraha Jumlada 1709-S soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha |Laba-qarxin
Midabka:Madow + Cas / Madow + Buluug
Ma samayn kartaa Logo la habeeyey?
Haa, waxaan samayn karnaa Logo la habeeyey.
Waa maxay faa'iidada alaabtayada suuqa?
Soo saarista asalka ah ee 1aad OED & ODM, Naqshad 2nd asalka R&D, 3rd dhamaadka tayada sare & waarta, xirmo xoogan 4th.
Maxaynu u dooranaynaa shirkadeena?
Dhammaan alaabooyinka waxaa si toos ah loo sameeyay oo laga soo raray warshadeena oo leh qiimo tartan iyo kontorool tayada la isku halleyn karo.
Shahaado noocee ah ayaan haynaa?
Shahaadada CE & shahaadada ROHS & shahaadada FCC.
Ma aha oo kaliya isku dayi doonaa our ugu weyn si ay u bixiyaan adeegyada cajiib ah qof kasta oo wax iibsanaya, laakiin sidoo kale waxaan diyaar u nahay in ay helaan talo kasta oo ay bixiyaan iibsadayaasha our tayada sare ee Shiinaha Factory Price Computer Mouse Pad Free Mouse Pad Casriga ah ee RGB Gaming Miiska ee Gamer, Ku soo dhawoow inaad la xiriirto anaga haddii aad ku cajabisay gudaha badeecadayada, waxaanu ku siin doonaa qiimo sare oo tayo iyo qiimo leh.
Miis Kombiyuutar oo Tayo Sare leh, Miis Ciyaareed, Inta lagu jiro 8 sano, Hadda waxaan ka qayb qaadanay in ka badan 15 bandhigyo, waxay helaysaa ammaanta ugu sareysa ee macaamiisha kasta.Shirkadeena waxay had iyo jeer hiigsaneysaa inay macaamiisha siiso badeecada ugu fiican oo leh qiimo jaban.Waxaan dadaal badan ku bixinay sidii aan ku gaari lahayn xaaladan guul-guul, waxaanan si kal iyo laab ah kuugu soo dhawaynaynaa inaad nagu soo biirto.nagu soo biir, tus quruxdaada.Had iyo jeer waxaan ahaan doonaa doorashadaada koowaad.Na kalsoonow, weligaa qalbi jabi maysid.
Hore: Qaabka miiska kombayutarka dhererka korantada lagu hagaajin karo Model HA-01
Xiga: Ciyaartoyga Kursiga Model 1501-3